Tababarka SEO-yada laga bilaabo Semptarka
Sanadkii 2004, mid ayaa awooday inuu helo boggaga hore ee SERP Google isaga oo adeegsanaya xeelado sida qoraallada algorithm (sida, Panda iyo Pigeon). Si kastaba ha ahaatee, hadda, isticmaalka taatikooyinkani waxay samayn karaan goob si loo illoobo gebi ahaanba. Si aad ugu sii wado bogga natiijada raadinta Google, waxaad u baahan kartaa inaad caawimaad ka hesho xirfadle, ama haddii goobtaada hore loo ciqaabay, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad u hagaajisid arrinta. Kuwa soo socda ayaa ah talooyin ay bixiyaan Ivan Konovalov, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt Adeegyada Dijital ah, oo kaa caawin doona inaad gaarto booska sare ee Google - temperature monitoring freeware.
Ujeedada ugu weyn ee Google waa in ay soo bandhigto nuxurka macquulka ah iyo saaxiibtinimada dadka isticmaala. Iyada oo ku xidhan qaybta ganacsiga ee aad ka shaqeyneyso, waxaa laga yaabaa inay jirto baahi loo qabo wiiggii wiiggii. Haddii aan la cusbooneysiinin, ka dibna waxaa loo isticmaali doonaa dadka isticmaala. Sidaa daraadeed, waxa SEO waa inuu sameeyaa waa inuu sii wanaajiyo cusbooneysiinta goobta si ay ula xiriirto dadka isticmaala mudo dheer..
Qodobka daabacaadda iyo ka koobnaanta.
Qoraal daabacan macnaheedu waa in mid ka mid ah uu qoray maqaal kaas oo leh fikrado isku mid ah maqaal kale. Macluumaadka kakooban micnaheedu waa in mid ka mid ah uu dib u qorayo ama nuqul ka dhigi doono wax isku mid ah maqaallo kala duwan, taasina si sahlan ayaa loo ogaan karaa. Si kastaba ha noqotee, isla waqtigaas, qofkani macnaheedu maaha inuu waxyeello u keeno. Haddii arrintaani dhacdo, waxa uu qofku samayn karo waa inuu qoro nuqul xirfadle ah oo xirfad leh si uu u qoro wax tayo sare leh, oo gaar ah.
suuqa saamileyda ah.
Haddii qofku ganacsigiisa ka shaqeeyo, waxaa muhiim ah in aan la dhisin xiriirinta ama aanu kuu siino alaab aad ku beddesho dib u eegis wanaagsan. Ka sokow, ha ilaawin inaad weydiiso bloggers in ay ku daraan sifaha "nofollow". Sidoo kale, haddii mid ka mid ah iibiye online ah, waa fiicantahay inaanad ku darin sifooyinka "dofollow". Hase yeeshee, haddii arrintan ay dhacdo, waxa uu qofku samayn karo waa inuu dhiirigeliyo dib-u-eegayaashu inay daacad yihiin ama hubiyaan in badeecadaha aad iibinayso ay tahay mid tayo sare leh.
Ka hor intaanad gelin isku xidhka boggaaga, waa inaad sameysaa horumarinta SEO sida ugu macquulsan. Fursada ugu fiican ee halkan waa inay shaqaaleysiiso xirfadle SEO takhasus leh oo awood u leh inuu falanqeeyo website-ka si loogu hagaajiyo oo loo dhiso heer sarreeya SERPs. Sidaa darteed, ma aha oo kaliya inaad hagaajiso oo aad degto boggaaga laakiin sidoo kale ganacsigaagu wuxuu horumariyaa.